iPhone SE 2020 က ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာပြီလား?
ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ iPhone SE 2020
iPhone SE 2020 မှာ ထွက်မယ်ထွက်မယ်နဲ့ ကောလာဟလ မျိုးစုံကြားခဲ့ရတာ အခုတော့ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝသွားခဲ့ပြီ ဆိုရမှာပါ။ စကားချီးလေးမစခင် နိဒါန်းပျိုးချင်တာ ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဆိုတာ ဘာလဲပေါ့? Quality ဖက်မသွားခင် Brand Image လား? ဒါပြီးသွားမှ ဘယ်လောက်စျေးနဲ့ ရောင်းချနေလဲ မော်ဒယ်နာမည်ကို ကြည့်ပြီး အကဲစမ်းကြတယ်။
Finally!! ပေးရတဲ့စျေးနဲ့ (ထိုက်တန်တဲ့) Performance ၊ Display နဲ့ ကင်မရာ အရည်သွေးပါဝင်လာမှ ပြောကျပါတယ် ဘာတဲ့…Price-to-performance ဆိုလား ညွန်းကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း Industry ဖက် လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း အများစုက ပရိသတ် တောင်းဆိုတာနောက် လိုက်နေသူတွေချည်းပါ။
ဒါပေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် အခြေခံအကျဆုံး လိုအပ်ချက်ကဘာလဲ?
ဒီမေးခွန်း ဖြေရရင် Apple ဖခင်ကြီး Steve Jobs ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပဲ စရမှာပါ (ဒီစကားကို ခေတ်လူငယ်တွေ လက်ခံချင်မှ လက်ခံလိမ့်မယ်)
“Screen Size ၄ လက်မထက် ပိုကြီးတဲ့ ဖုန်းတွေကို ဘယ်သူမှ ဝယ်ချင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး” လို့ နှုတ်ဖျားက ထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဲ့ကာလတုန်းက Apple ကို Raid နေတာ Samsung ၊ ခင်ဗျားတို့ ကြွေနေတဲ့ 90Hz ၊ 120Hz Dynamic AMOLED Panel မထုတ်နိုင်သေးခင် ဒုတိယမျိုးဆက် sAMOLED Plus Screen နဲ့ ဆျာအကျဆုံး စမတ်ဖုန်း Display နဲ့ အပြိုင် စျေးကွက်လုနေတဲ့ အချိန်ပေါ့။
Android စစ်တပ်ကြီးထဲမှာ အင်အားကြီးနေတာ Samsung အပြင် HTC ၊ Sony တို့ပါဝင်ခဲ့သလို ကင်မရာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ HUAWEI ကို အနောက်နိုင်ငံက သိတောင်မသိကြသေးဘူး။ လိုရင်းပဲ သွားရရင် အဲ့တုန်းက Android စမတ်ဖုန်းတွေဟာ 3.5” အရွယ် iPhone4ထက် ပိုကြီးတယ်။
ပြောရရင်တော့ မင်းထက်ပိုကိတ်တယ်ပေ့ါကွာ၊ 2010 ကျော်လာတဲ့ ကာလတွေမှာ Galaxy S2 ၊ S3 စီးရီးတွေက Samsung ကို မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သလို Phablet လို့ နာမည်တွင်လာတဲ့ Note တွေက Iconic မော်ဒယ်တစ်ခုလို ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ခုကြည့်လေ… Screen ငုပ်စိဖုန်းဆို စိတ်မဝင်စားကြတော့ဘူး။ ဂိမ်းဆော့ဖို့၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ပဲ အာရုံထားကြတဲ့အတွက် ဖုန်းဆိုတဲ့ အမျိုးဟာ Entertainment ၊ Recreation သုံးဖို့ ထုတ်ထားတဲ့ Device ဖြစ်လာတယ်။
သူ့အတွက်ပံ့ပိုးထားတဲ့ Processor ၊ GPU ဟာ လိုအပ်တာထက် Powerful ဖြစ်လာသလို သုံးစွဲသူအလိုကျ Gaming Performance ၊ Fluid Experience ရဖို့ ကန့်သတ်သလို ပြောင်းလာတယ်။ ဒါကြောင့် “No One is Going to Buy” စကားတစ်ခွန်းက ပြိုင်ဆိုင်မှု အားကောင်းလာတဲ့ အရှိန်ကြောင့် သေသွားခဲ့တယ်။
နောက်တစ်နည်း Smartphone တစ်လုံးရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး လိုအပ်ချက်တစ်ခု မှေးမိန်ခဲ့ရတယ်။ တခြားသူတွေ ဘယ်လိုအတွေးရှိလဲ မသိပေမယ့် အများစု သိနေတာက 4.7” ခေတ်ကုန်နေပြီ။ အနည်းဆုံး 5.5” လောက်သွားမှ ကိုင်ရတာ Feel ရှိတယ် ခံစားရသလို နောက်တစ်ချက် ဂိမ်းဆော့မလား? ရုပ်ရှင်ကြည့်မလား အိုကေတယ်လေး….
တကယ်တော့ Compact တန်းမှာ ရွေးချယ်စရာဆိုလို့ လက်ချိုးရေပြလို့တောင် ရပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုး၊ စိတ်အထွေထွေဆိုသလိုပဲ Screen Size ကြီးတာ၊ သေးတာထက် Neutral ဖြစ်တာကိုပဲ ပြောရရင် 4.7” ဟာ ဖုန်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကိုတော့ ပေးစွမ်းပါတယ် (သုံးစွဲဖူးသူတွေဆိုရင် ဘာဆိုလိုလဲ သဘောပေါက်မှာပါ)
အခု iPhone SE 2020 မိတ်ဆက်တော့လည်း တချို့က ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းလို့ တမင်ပြောမသွားပေမယ့် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဥ်ကာလမှာ လူတွေဟာ ဖုန်းကိုပဲ အားထားနေရတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဖြည့်တွေးကြည့်ရင်တော့ အချိန်နဲ့တပြေးညီ သိရဖို့ ဘယ်သူမဆို ဖုန်းတစ်လုံးတော့ လိုအပ်မှာပဲလေး။
အများစုက Social Apps ကနေ Information ရှဲကြတာဆိုတော့ Facebook (Twitter) မသုံးရင် လူရာမဝင်တော့သလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒီအချက်ကိုတော့ လက်မခံချင်ပါဘူး၊ Original iPhone SE ကို 2018 နောက်ပိုင်း မထုတ်တော့တာ ခေတ်အနေထားအရ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Apple သုံးတဲ့ ပရိယာယ်က အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာပဲလေး။
အခုအနေထားတိုင်း ၃ နှစ်လောက် Proof ဖြစ်နေတဲ့ Specs နဲ့ ကြေညာတာ အသေသတ်ဖို့ မွေးလာတာလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ Price-to-performance ခေါင်းစဥ်အောက်မှာ Fair ဖြစ်တယ်လို့ မခံစားရပေမယ့် $399 တန်ဖုန်းတစ်လုံး စွမ်းဆောင်ရည်က Powerful ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဘာရွေးကြမလဲ?
iPhone SE 2020 turns Compact Alive
လေယူရာယိမ်း ဖြစ်ကြဦးမယ့် Pixel 4a ၊ Sony 10 II ထွက်လာရင် ငမ်းငမ်းတက်ကြပါဦးမယ် (ကျနော်အပါဝင်) ဒီကောင်တွေက Compact တန်းမှာ စစ်ခင်းမယ့် နှောင်တော်တွေဆိုပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ တွေးနေသလို A13 Counterpart တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် Compact တန်းမှာ သူစီကိုယ်ငှာ Experience အသစ် ပေးစွမ်းကြဦးမယ်။
ဒါပေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကို (လုပ်ချင်သလို) ပြောင်းလဲနိုင်တာ Apple ပဲ ရှိတာပါ။ ဆိုလိုတာ တစ်နှစ်တစ်နှစ် မရိုးရအောင် Smartphone Trend ကစားနေတာ ပန်းသီးဖြစ်နေသလို ဘာထုတ်ထုတ် အဟုတ်ထင်ကြတယ်။
Follow လိုက်ကြတယ် (အနိုင်ရဖို့ကိုး) iPhone SE 2020 ဟာ ခေတ်သစ် စမတ်ဖုန်းစံနှုန်းကို ဒီ Price Level မှာ ငါလုပ်ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Risk ယူထားတယ် (Budget ၊ Mid-range Level ကို မဆိုလိုပါ) အဲ့တော့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ဆိုရင်ရော ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ?
စျေးနှုန်းလား? Quality နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်လား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တနေ့တာ အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Class လား? ဒီလို အကြောင်းပြချက် တွေအတွက် iPhone SE 2020 က အဖြေဖြစ်နိုင်ပေမယ့် တချို့သူတွေအတွက်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။
Reference: TheVerge ၊ Apple
OnePlus 8 Series နှင့်အတူ ပြောင်းလဲလာသော ONEPLUS
စမတ်ဖုန်းနဲ့ PC တွေမှာ Display ပိုင်းက Performance ထက် အရေးပါတာလဲ အပိုင်း (၁)